Ucija abesifazane baseNquthu kwezokwakha | Isolezwe
Ucija abesifazane baseNquthu kwezokwakha
intandokazi / 28 February 2019, 11:11am / INTATHELI YESOLEZWE
UNksz Gcobiswa Komisa ungene emkhakheni wezokwakha ngoba efuna amathuba angcono okuzithuthukisa kwezamabhizinisi.
OWESIFAZANE waKwaZulu-Natal useqale uhlelo lokufukula abesimame baseNquthu ukuthi bangene emkhakheni wezokwakha.
Kumanje uzinze eGauteng kodwa uqoke ukuthi njalo ngonyaka abe nezinhlelo zokufukula abesimame baseNquthu ukuze bakwazi ukuzithuthukisa ngokwamakhono abo azobakhulisa kwezomnotho.
“Kulo mkhankaso kukhona odadewethu esisebenza ndawonye nabo. Sisuka ezindaweni ezahlukene eKZN okubalwa naseNquthu naseMpangeni. Yingakho siqoke yona iNquthu ukuba sibe nemibuthano esiyenza njalo ngenyanga yabesifazane okuwu-Agasti ukucija abesimame ukuba bangene emabhizinisini anamathuba angcono nazobaphilisa isikhathi eside,” kusho uNksz Komisa.
Uqhube wathi bake bacabanga ukusiza abampofu okuyizintandane ngokuzihambisela ukudla eNquthu kodwa babone ukuthi lokhu kukodwa akuzukuba wusizo lwesikhathi eside.
“Yingakho sinqume ukuthi uma kunemindeni esiyisizayo, kumele sibheke ukuthi singabachushisa kanjani kwezamabhizinisi nakwezemfundo ukuze bakwazi ukuzimela kusasa. Ngikhuluma nje kunomndeni ophethwe izingane ezisencane zamantombazane. Sifuna ukuwusiza lo mndeni ngokuthi singagcini nje ngokunikelela ngamaphasela okudla nokubakhela kodwa okubalulekile siqinisekise ukuthi izingane ziyaqhubeka nesikole ukuze zikwazi ukuzimela,” kuqhuba uNksz Komisa.
Uthe umbuthano wabo wabesifazane wokucijana ngezamabhizinisi abebewenzele eNquthu ube yimpumelelo. Uveze ukuthi yikho lokhu okwenze bagqugquzeleka kozakwabo ekutheni kube oweminyaka yonke.
UNksz Komisa ugxile kakhulu ebhizinisini lomkhakha wezokwakha okuyilo alibona limusa kude yize eqale kunzima. Uthi limenza ahlale ematasa nemihlangano eyahlukene kanti usuku lwakhe uluqala ekuseni ngehora lesihlanu. Yileso sikhathi azivocavoca ngaso umzimba alungisele nomndeni wakhe bese ngehora lesikhombisa abhekane nebhizinisi kuze kuyoshona ilanga.
Uthe ukuzivocavoca yikho okumenza ahlale ekhululekile emqondweni.